Isukeenista Unkapanı waa in lagu cusboonaysiiyo inta lagu gudajiray Wajahadda Mashruuca Tram | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulIsku-xidhka Unkapanı waa la cusbooneysiin doonaa inta ay gaarsiisan tahay Mashruuca Tram
11 / 10 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, taraamka
isgoyska unkapani waxaa dib loogu cusbooneysiin doonaa baaxadda mashruuca taraamka
IMM waxay qaaday talaabo ay dib ugu cusbooneysiineyso Halista Unkapanı. Baaxadda shaqada dhexdeeda, marinka Eminönü - Alibeyköy Tramway ayaa la marin doonaa.
Dawladda Hoose ee Magaalada Istambul (IMM) waxay go’aansatay inay dumiso oo ay dib u dhis ku sameyso Isku-xidhka Unkapanı, halkaas oo tayada la taaban karo iyo daraasadaha la taaban karo lagu sameeyay 2012. Imtixaanka, laambadaha ku yaal buundada hoosteeda iyadoo ay ugu wacan tahay shilalka gawaarida iyo burburka; birta ku jirta sibidhka ayaa la kashifay, qaarna ay ka jabtay; Waxaa la ogaaday in caaryada iyo wax xagta oo kale ah ay ku dhaceen gudaha la taaban karo oo birta iyo biyuhu ay waxyeelladu ka soo gaartay. Xaaladda guud, qandaraaska “Unkapanı Junction Application Project Eylül waxaa la qabtay Sebtember 2017.
Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu wuxuu amar ku bixiyay dhismaha mashruucan oo aan la bilaabin horaantii la soo dhaafay markii uu xafiiska qabtay. Xafiisyada IMM waxay go'aamisay in marinka Eminönü - Alibeyköy Tramway aan tixgelin la siinin hindisada. Sidaa darteed, waxaa la go’aamiyay in la buriyo hindisada.
Marka la eego baaxadda "Isku-xidhka Unkapanı iyo Eminönü - Alibeyköy Tram Tunnel", mashruucan hadda dib ayaa loo eegay bil gudaheed 2 bilood ka dib qandaraaska dhismuhu si dhakhso leh ayuu u dhammaaday shaqaduna sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah.
Sida laga soo xigtay daraasadaha, isgoyska ka hor buundada iyo wax soosaarka dhulka hoostiisa, oo isu beddela jasiirad wareersan, taraafikada ayaa la bixin doonaa iyada oo aan kala go ’lahayn. Barakaca kaabayaasha gobolka, oo loo arko inuu muhiim u yahay mashruuca, waxaa sameyn doona 'İSKİ'.
Masaafad dhererkeedu yahay mitir dhererkeedu yahay MNUMX mitir 170 ayaa loo dhisi doonaa marinka Eminönü-Alibeyköy Tramway, kaas oo dhismihiisu socdo. Waxaa jiri doona wado lugeynaya iyo baaskiil wadada tunta laga dhisayo kahor isgoyska. Laamaha iyo isgoysyada waxaa dib loo habeyn doonaa iyadoo la raacayo isgoyska cusub iyo tunnel-ka cusub.
Ogeysiiska Qandaraaska: Dhismaha Cusbashada Cusub ee Unkapanı Köprülü
Kaamah taraamijka waa la cusbooneysiin doonaa
Antalya 3. Giyaseddin Keyhüsrev Junction ee Mashruuca Nidaamka Tareenka
Halis-Unkapani Mashruuca Baasaboorka Tareenka Tareenka
Haddii Galata iyo Unkapan isku dhow yihiin
Ogeysiiska Qandaraaska: Dib uhabaynta iyo Xoojinta Unkapanı iyo Galata Bridges
Ogaysiis Qandaraasle: Halic - Isku-xirka Waddada Iskudhafka ee Unkapani
Ankara oo dib loo soo celiyay
Halis-Unkapani Wadada Tareenka Wadada Tube
Taas oo ka dhalatay hindise-ka-dhiska Khalic-Unkapanı Wadooyinka Tareenka Tube-ka
Unkapanı iyo Galata Bridge waxay u furan yihiin Gaadiidka Badda
Unkapani Bridge waxaa lagu xiraa gaadiidka
Topbas: Buundada Unkapani waa la kicin doonaa
Dib-u-beddelku wuxuu ka bilaabmaa Bridge Unkapani
Eminonu Alibeykoy Tram Tunnel
Mashruuca Codsiga Isku-Darka Unkapanı